Popular Post | Danya Wadi
By danyawadi August 20, 2015 Leaveacomment
၀န်ကြီးဌာနများ အစိုးရမီဒီယာများ ပြည်တွင်းသတင်းဌာနများ ပုဂ္ဂလိကသတင်းသမားများ ပြည်ပသတင်းဌာနများ နိုင်ငံတကာသတင်းဌာနများ သမ္မတရုံး မြန်မာ့အလင်း ဧရာဝတီ သစ်ထူးလွင် ဗွီအိုအေ မြန်မာ ရိုက်တာ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကြေးမုံ ဧရာဝတီဘလော့ ဒီမိုဝေယံ ဘီဘီစီ မြန်မာ နယူးယောက်တိုင်း(မ)သတင်းဌာန အစိုးရအဖွဲ့ရုံး ဟံသာဝတီ မြန်မာတိုင်း(မ) ရွှေဒေသ ဒီဗွီဘီသတင်းဌာန အေအက်(ဖ)ပီသတင်းဌာန ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန ရတနာပုံနေပြည်တော်သတင်း ရန်ကုန်မီဒီယာ ဥုံဘလော့ အာရ်အက်(ဖ)အေသတင်းဌာန ဘန်ကောက်ပို့(စ)သတင်းဌာန လယ်ယာဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန မြ၀တီ ဟော့(တ)နယူး(စ) လမ်းပြကြယ် အင်ဒီပန်းဒင့် စထရိတ်တိုင်း(မ)သတင်းဌာန သမ၀ါယမ၀န်ကြီးဌာန မြ၀တီနက် မဇ္ဖျိမ မျိုးဆက်သစ် ဒီမိုကရက်တစ်မြန်မာ့အသံ(နော်ဝေ) စီအန်အန်သတင်းဌာန ဟိုတယ်ခရီးဝန်ကြီးဌာန မြန်မာတီဗွီ(၃) ကမာရွတ်မီဒီယာ ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ ရဲရဲတောက်မီဒီယာ အေဘီစီသတင်းဌာန စီးပွားကူးသန်း ၀န်ကြီးဌာန မြန်မာ့အသံနှင့်ရုပ်မြင်သံကြား မြန်မာ့အသည်းနှလုံး လင်္ကာ […]
Danyawadi popular post link: လူကြိုက်အများဆုံးခေါင်းစဉ်များ
By danyawadi July 28, 2014 Leaveacomment
Update Edid on 15 – 8 – 2015 GTC ကျောင်းသား/သူနှစ်ဦး၏ဗီဒီယိုဖိုင် 326,753 ဓည၀တီဆိုဒ်သို့မှန်ကန်သော သတင်း၊ ဆောင်း ပါး၊ ဓါတ် ပုံ များ ပေး ပို့ လို ပါ က danyawadi9@gmail.com နဲ့ ဆက် သွယ် ပါ ။ . . . If you want to post any real documents such as , History,Articles , photos and News ,Contact here. 319,052 သံလျှင် GTC […]
Danya Wadi Web Results ဓည၀တီ ၀ပ် Results ကို လေ့လာရန်
By danyawadi January 13, 2014 Leaveacomment
Web Results Danya Wadi | The Voice Of Arakani danyawadi.wordpress.com By danyawadi October 18, 2014 Leaveacomment. အမေရိကကာ Dr. Brian Berry ဆိုသူဟာ လူသားတွေမှာ … Danyawadi Prince | Facebook https://www.facebook.com/danyawadi.prince Danyawadi Prince is on Facebook. Join Facebook to connect with Danyawadi Prince and others you may know. Facebook gives people the power to share and… […]
Danyawadi popular post ၊ လူကြိုက် အများဆုံးခေါင်းစဉ်များ….
By danyawadi August 25, 2012 Leaveacomment
Update Edid on 27 –4– 2014 Often Edid this post and you can find to click Contact Categories. ခေါင်းစဉ်အသစ်များ ပါဝင်နိုင်ရန် မကြာခဏ Edit လုပ်ပေးသွားမည်။ Contact Categories ကိုနှိပ်လျှင်အလွယ်တကူရှာနိုင်ပါသည်။ မိမိတို့သတင်း၊ဆောင်းပါး၊ဓါတ်ပုံများပေးပို့လိုပါက danyawadi9@gmail.com သို့ပေးပို့ပါရန်သိစေအပ်ပါသည်။ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx GTC ကျောင်းသား/သူနှစ်ဦး၏ဗီဒီယိုဖိုင် 96,442 သံလျှင် GTC ကစုံတွဲ၏လုပ်ရပ် 94,779 THIT HTOO LWIN Movies, Videos, VCD, Latest 66,260 (unknown or deleted) 47,228 မောင် (စွယ်စုံကျမ်း) […]